Vishnu: Mumwe wevanamwari vanonyanya kukosha veIndia | Absolut Kufamba
Vishnu: Mumwe wevanamwari vanonyanya kukosha veIndia
Isabel | | Updated on 18/02/2021 12:12 | India
Ungade here kuenda kuIndia pazororo rako rinotevera uye unofarira kuziva zvakawanda nezvetsika nemagariro. Chimwe chezvinhu zvisinganyanyo kuzivikanwa kune vekuMadokero chitendero chechiHindu, chakakosha kuziva nzira yekufunga uye kunzwa kwevagari veIndia.
Chitendero chechiHindu chizere nengano uye zvinoshamisa zviitiko zvinoitwa navanamwari, vamwari, madhimoni, vanhu, uye zvimwe zvisikwa. Nekudaro, ivo vanamwari vakuru vechiHindu vatatu: Brahma, Vishnu naShiva. Imwe neimwe inomiririra yakakosha simba yekuvapo kwechisiko: musiki wayo ndiBrahma, iro rinoenderera simba ndiVishnu uye iro rinoparadza ndiShiva. Ose matatu ndiwo Trimurti kana "mafomu matatu" muSanskrit, ndiko kuti, hutatu hwechiHindu.
Ndeipi basa rine iyo Trimurti? Ndeapi mabasa emwari wega wega mukati maro? Mune ino posvo isu tinotsvaga mune chinamato cheHindu kuti tizive zvishoma zvirinani vanamwari vatatu ava uye kunyanya Vishnu. Ramba uchiverenga mushure mekusvetuka!
1 Iyo Trimurti
2 Vishnu ndiani?
2.1 Etymological dudziro yaVishnu
3 Vishnu anorondedzerwa sei?
4 Ndeapi ari maficha ezvouMwari aVishnu uye anokudzwa sei?
4.1 Ndeapi maavatat aVishnu?
4.2 Mazera evanhu
Sezvandambotaura, vatatu ndivo vanamwari vanonyanya kukosha vechiHindu: Brahma, Vishnu naShiva. Ivo vese vanogadzira iyo trimurti uye imwe neimwe yavo ine simba rinozadzisa chiyero chechisiko, saka kuti hazvigoneke kuve nemimba yezvisikwa (Brahma) kana kuparadzwa kwechisiko (Shiva). Uyezve, muchokwadi kuchengetedza kwayo isimba rinotsigira kurongeka kwepasi. Aya ndiwo maratidziro anoita vakatendeka pachinamato ichi zvinhu zvese nekudaro kukosha kukuru kweava mwari mairi.
Kubva kuBrahma Brahmanism yakavambwa muIndia. Bazi reHinduism iro rinomutora semwari mukuru, mavambo evamwe vamwari, vanova kuratidzwa kwake. Kubva pakurwiswa kweAryan, Brahmanism yakazvarwa, iyo yakaona Shiva naVishnu sevamwari vadiki.
Anozivikanwa muchitendero chechiHindu samwari wekunaka nekuchengetedza, ndiye mwari mukuru wazvino weVaisnavism rinova bazi reHinduism iro rine Vishnu samwari mukuru. Zvinoenderana neazvino izvi, ari iye musiki wezvose, mwari uyu akafunga kuzviburitsa mu trimurti kana "mafomu matatu."
Vishnu anopomerwa basa rekuyera zvakanaka nezvakaipa munyika uye vanhu vanomukumbira rubatsiro mukutsvaga nzira yeruponeso.
Etymological dudziro yaVishnu
Kana tichiongorora zita ramwari mune zvaro etymological, chikamu chemudzi "vis" chinoreva kugadzirisa kana kuzadza izvo zvinouya kuzoburitsa humwe hunhu hwaVishnu "uyo anowanda muzvinhu zvese."
Nenzira iyi zvinogumiswa kuti zita rake rinoreva mwari uyo akazadza zvinhu zvese nevanhu vanogara munyika. Kutanga kubva pachirevo ichi, Vishnu haina kuganhurirwa munguva, nzvimbo kana chinhu. Simba rake rinova risingaperi. Saizvozvowo, kune vatsvaguriri vanochengetedza kuti dudziro yeetymological yezita iri "izvo zvinopinda mune zvese."
Vishnu anorondedzerwa sei?
Iye anowanzo fananidzirwa semwari-ganda-ganda mwari ane fomu yemunhu uye maoko mana akabata zvinhu zvakasiyana siyana zvinotakura zvakasiyana zvinoreva:
Padma (maruva erotus ane kunhuwirira kunofarirwa neVishnuists)
Sudarshaná chakrá (chibvumirano chakafanana neicho chinopfekwa nemhare dze ninja dzinoshandiswa naVishnu kuparadza madhimoni)
Shankhá (conch shell ine ruzha muIndia inomiririra kukunda mushure mekukunda muvengi)
Mhete yegoridhe (yekupwanya misoro yevaiti vezvakaipa)
Iye anowanzooneswa akagara pamaruva erotus naLaksmi, mukadzi wake, pane rimwe remabvi ake. Ndiye mwarikadzi wehupfumi uye anozviratidza bhuti-sakti (zvisikwa) uye kriya-sakti (basa rekugadzira). Sezvo Vishnu asingakwanise kuve chikamu cheakazvigadzira (ahamta) kana simba rake, anoda mukadzi anogara anaye. Nechikonzero ichi mwarikadzi Laksmi anofanirwa kuperekedza Vishnu mune zvese zvaakaita.
Ndeapi ari maficha ezvouMwari aVishnu uye anokudzwa sei?
Mwari Vishnu ane hunhu hwoumwari hwakasiyana: kuwana izvo zvaari kuda (prakamya), hukuru (isitva), hunhu hwekudzvinyirira zvishuwo (kama vasayitva), kutonga pamusoro pevamwe (vasitva), kuwana chero chinhu (prapti), masimba emweya (aishwaria), ruzivo (gnana) kana simba (shakti), pakati pevamwe vazhinji.
Hazvizivikanwe zvechokwadi kuti Vishnu akatanga kunamatwa riini kana kuti sei. Mukuunganidzwa kwezvitendero zvevaAryan (maVeda) mwari uyu akabatana kwazvo neIndra uye akarongwa samwari mudiki. Pave paya ndipo paakazova chikamu chetrimurti muchitendero chechiHindu uye mwari anonyanya kukosha weichi chitendero.
Nhasi maHindu anotenda kuti Vishnu akaverengerwa semavatat akasiyana paPasi uye mwari uyu anonamatwa muchimiro chea avatat nekushinga.
Ndeapi maavatat aVishnu?
Mukati mechiHindu, avatar ndiko kuiswa kwemwari, kunyanya Vishnu. Ndokunge, zvakaenzana nevamwari vechiGiriki nevechiRoma. Mukati meVaisnavism, maavatat aya akaungana mumakirasi akasiyana maererano nehunhu uye nebasa rinotsanangurwa muMagwaro.
Vananá: diki, akabuda muruse-iugá.
Matsia: iyo hove, yakaonekwa musia-iugá.
Kurma: kamba, yakabuda musia-jugá.
Varaja: nguruve yemusango, yakaonekwa musatan-iugá.
Narasinja - Iyo hafu shumba, hafu murume kuita muviri. Akabuda ari satia-iugá kuti akunde dhimoni Jirania Kashipú.
Parashurama: (Rama nedemo), yakaonekwa mutreta-jugá.
Rama: mambo weAiodhia, akabuda mutreta-iugá.
Krishna: (anokwezva) akaonekwa mu duapara-iugá, pamwe nehama yake Balaram. Mazhinji mafambiro evaVisnuist anomuona semunhu waVishnu.
Buddha: (sage) akabuda muKali-iugá. Iwo maBhaibheri asingatauri Buddha seyepfumbamwe avatar nyika Balaram panzvimbo.
Kalki: muparadzi weasina kuchena. Inotarisirwa kuoneka pakupera kwe kali-iugá.
MuHinduism iuga imwe yeaya mazera mana ayo nguva huru kana majā iuga yakakamurwa. Era ina kana iugas ndeaya:
Satia-iuga (nguva yechokwadi): 1.728.000 makore ekuberekwa.
Duapara-iuga: Makore mazana masere nemakumi masere nemana emakore.
Treta-iuga: makore 1.296.000.
Káli-iuga: nguva yedhimoni Kali yemakore 432.000.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Vishnu: Mumwe wevanamwari vanonyanya kukosha veIndia
beuk otavia ndirwo runyararo lol
Ini ndinonyatsoda zvese zvine chekuita netsika yechiHindu,
Chokwadi ndechekuti, izvi zvinoshoresa. Dai vakadzidza sainzi vaizoona kuti zvinosemesa sei kuverenga chinyorwa ichi.
Ruth Maria Ortiz akadaro
Ini ndinotenda mukuzvarwa patsva uye ndinofunga kuti musikana anogona kuva, ndinofara nezvechinamato cheHindu nekuti havana kurasikirwa nekutenda kwavo, hunhu, tsika, ndinoda iyo tsika.
Pindura kuna Ruth Maria Ortiz
Tamara garcia akadaro
Ini ndinodawo tsika iyoyo, asi munhu mumwe chete ndiye ati kusarongeka kushomeka kwemusikana iyeye kunodzikisira. Uye kuti vanomunamata saMwari ...
Muchidimbu, yega yega nehupengo hwavo.
Pindura Tamara Garcia
mwana anotyisa zvakadii
Pindura kune vanofara
Chokwadi ndechekuti ndinonzwisisa musikana uyu, ndinotenda kuti ndiko kuzvarwa patsva sezvo kuchinakidza asi muviri wake unonakidza nekuti wakaita saVishnu
Pindura kuna alegandro
Zvinonyadzisa, zvinotyisa, zvinosemesa, chikara chinonakidza sei
pinki chena akadaro
Ini ndinofunga tinofanirwa kuongorora zvakanaka kana tichienda kana tichida kutaura nezve chimwe chinhu. pane mukadzi wechidiki anoonekwa achiti anoda tsika iyoyo. Kana iwe usingazive zvauri kutaura, zviri nani kuti usataure. Icho chihedheni chirimo munyika iyoyo ndicho chakaparadza maHindu sezvo vasingazive MWARI WEMASIMBA, Mwari Mupenyu ariko uye Iye Mumwechete anokwanisa kushandura hupenyu hwavo hwerima nekusuwa kune avo vavanotambura nhasi.
Pindura blnca rosa
Alejandro, kana iwe usingazive zviri kuitika ipapo, zvirinani kuti uongorore zvese zviri kumashure kwezvinhu izvi. Zvekuti vanhu vanoparara nekuda kwekushaya ruzivo hazviite senge zvinosetsa kwandiri, ndoda kuti ivo vanotenda kuna vamwari vanongounza rufu, hurombo uye nhamo kuvanhu. Ini ndinofunga kuti kutaura nezve hurombo uye kusuwa kuri kutambura vanhu vakatambura vechiHindu izvi hazvisi zvekuseka zvachose.
Chiedza chinofamba makiromita mazana matatu pasekondi, nyeredzi yepedyo kusvika pasi ingangoita makore mana ekuyera kure, idzi idhata dzinotiza kunzwisisa kwedu kwedaro nenguva, asi isu tinoramba tichidavira mumashiripiti, mukuzvarwa patsva munaMwari mukuchenesa mweya yedu. , asi isu hatichakwanisa kuona kukura kwechisiko (wedzera 300,000 X 4 X 300,000 X 60 X 24 ndiyo nhambwe mumakiromita kune nyeredzi iri padyo nepasi) kana jecha remabhishi ese epasi, tsanga imwe neimwe yejecha haingambove iro renyeredzi iro zvakare rine mamirioni enyeredzi uye isu tiri mune rimwe reaya mapoka enyeredzi. Izvo chaizvo ndezvekurarama uye kurega kurarama, hakuna humwe hupenyu, hapana rimwe awa, kutenda mune humwari chinhu chiri nyore pane kutsanangura isingaperi nyika matiri isu tisina kana chinhu. YAVE NGUVA YEKUMUKA
Ini ndinofanira kukupa iwe bang yekuisa iyo pikicha, yakapenga
Mhoro .. Ndiri kungoda .. kukuratidza izvi .. tarisa pahuma .. mucherechedzo wainounza .. uye uienzanise nechiratidzo chevaIjipita. pamusoro pemisoro yavo .. ndatenda .. zvinonakidza ..
Pindura kuna danii
NDINOFUNGA KUTI CHIVI HAKUNA KUNOBVA KUMUKOMANA AKANYORA BHUKU, SEZVO KUZIVISA KUTI HAIYO YAKAIPA, UYE IYE ZVAKAjeka ANOTI MHINDI YEMAHINDU, ACHITANGIRA ZVINOTENDEKWA Ikoko, CHOKWADI KUKURUKURA HAKUSI KANA KUKUVADZWA KANA KUTI KWETE HERI CHETE CHETE KUSHURE CHIMWE CHINHU ... ZVAUNOTENDA KANA KUTI ASI MUIYO TSIKA CHISARUDZO CHEVANHU VOSE ... Uye HAPANA KUKURUKURIRWA KWENYU PANO. CHAKAIPA NDICHAFOTO NEKUTI CHINOBUDISA ZVINHU ZVINONYANYA ZVEMUSIKANA, VANOFANIRA KUVHARA CHISO CHAKE NEZVINHU ZVAKE ...
Ini ndinoremekedza tsika yavo asi nei ndichinamata mifananidzo yenhema nechikonzero vane hurombo nhamo dzakadzoserwa nehembe dzavo dzesitiri pamwe nekudzora kwepfungwa kwete moyo wakaringana chete asiwo ungwaru, hazvishamise kuti vane vana vakaremara nekutenda kwevamwari vavo vasina musoro.